Warshad taxane goynta otomaatiga ah - Shiinaha Soosaarayaasha taxanaha otomaatiga ah, Alaab-qeybiyeyaasha
Nooca gaaska nooca mashiinka jarjara ololka
Jidadka hagaha dhaadheer waxaa lagu xiraa adoo riixaya taarikada taakuleynta iyo isku xirka shaadhka, taas oo hubin karta toosnaanta toosan iyo isbarbar dhigga tareenka.
Nooca gantry mashiinka goynta plasma
Gawaarida otomaatiga ah iyo xakamaynta dhererka tooshka ayaa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha, oo leh hawlgal habboon.
Mashiinka goynta plasma 1530 cnc
Nidaamka caadiga ah ee lagu daaweeyo boodhka, qiiq iyo boodh dambe ma goynayo markuu wax gooyo, si hawlwadeenku ugu raaxaysto shaqadiisa, ilaa xad, iska ilaali luminta hawlwadeenka.
Mashiinka goynta plasma 1560 cnc
Heerka tamarta ee plasma, waxqabadka wanaagsan, heerka hoos u dhaca oo hooseeya, iyo nabada maskaxda badan. 1560 mashiinka goynta plasma cnc.
1000w 1500w 2000w 3000w bir cnc mashiinka goynta laser-ka
Iyada oo ay ku wada jiraan xaashi bir ah iyo goynta biibiile Mashiinka goynta leysarka fiber-ka.
Qalabka goynta: birta aan xarka lahayn, birta kaarboonka, birta daawaha ah, naxaasta, naxaasta, birta silikoonka, birta la shiilay, aaladda birta ah ee 'nikkel titanium', nikeel chromium alloy, titanium alloy iyo qalabka kale ee birta 2000w Cnc fiber laser, Mashiinka 3000w Cnc fiber laser jarida mashiinka.